Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jahwareerka xayiraadaha safarka ayaa sii kordhaya
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dadku waxay si aad ah ugu jahwareersan yihiin xannibaadaha safarka ee COVID-19 oo xitaa in ka badan ayaa arkay tayadooda nololeed oo dhibtay.
67% jawaabeyaasha sahanku waxay dareensan yihiin in xuduudaha dalka intiisa badan la furo hadda, taasoo ka dhigan 12 boqolkiiba dhibcaha laga qaaday sahankii Juun 2021.
64% jawaabeyaasha sahanku waxay dareensan yihiin in xiritaanka xudduudka aan loo baahnayn oo aysan waxtar u lahayn xakameynta fayraska (ilaa 11 dhibcood marka la gaaro Juun 2021).
73% ayaa ku jawaabay in tayadooda nololeed ay la ildaran tahay xayiraadaha safarka COVID-19 (oo ah 6 boqolkiiba dhibcaha laga bilaabo Juun 2021).
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa soo sheegay in dadka safarka ah ee hawada ku sii qulqulaya xannibaadaha safarka COVID-19. Sahan ay IATA u xilsaartay 4,700 oo jawaabeyaal ah 11 suuqyo bishii Sebtembar waxay muujisay kalsooni in halista COVID-19 si wax ku ool ah loo maareyn karo iyo in xorriyadda safarka la soo celiyo.
67% jawaabeyaasha ayaa dareensanaa in inta badan xuduudaha dalka la furi doono hadda, taasoo ka dhigan 12 boqolkiiba dhibcaha laga helay sahankii Juun 2021.
64% jawaabeyaasha ayaa dareensanaa in xiritaanka xudduudda aan loo baahnayn oo aysan waxtar u lahayn xakameynta fayraska (ilaa 11 dhibcood laga bilaabo Juun 2021).
“Dadku aad bay ugu jahwareersan yihiin Xayiraadaha safar ee covid-19 oo weliba in ka badan ayaa arkay tayadooda nololeed oo dhibtay. Ma arkaan baahida loo qabo xannibaadaha safarka si loo xakameeyo fayraska. Oo waxay seegeen waqtiyo qoys oo aad u badan, fursadaha horumarinta shaqsiyeed iyo mudnaanta ganacsiga. Marka la soo koobo, waxay tebayaan xorriyadda duulimaadka waxayna rabaan in la soo celiyo. Farriinta ay u dirayaan dowladaha ayaa ah: COVID-19 ma baaba'ayo, marka waa inaan dejinnaa hab aan ku maareyno khataraha annaga oo nool oo aan si caadi ah u safreyno, ”ayuu yiri Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud.
Taageeradu waxay u koraan baaritaanka ama tallaalka si loogu beddelo karantiil
Waxa ugu weyn ee ka hortaagan safarka hawada ayaa ah tallaabooyin karantiil. 84% jawaabeyaasha ayaa tilmaamay inaysan safri doonin haddii ay jirto fursad karantiil meel ay ku socdaan. Saamiga sii kordhaya ee jawaabeyaasha ayaa taageeraya saarista karantiil haddii:
Qof ayaa tijaabiyey diidmo COVID-19 (73% bishii Sebtembar marka la barbar dhigo 67% bishii Juun)
Qof ayaa la tallaalay (71% bishii Sebtembar marka la barbar dhigo 68% bishii Juun).